Umncintiswano Wamahlaya Esikole | Izincwadi Zamanje
Izisekelo zomncintiswano wamahlaya, ezibhekiswe kubantu abasha abaphakathi kweminyaka eyi-9 nengu-17 ubudala nezakhamizi zase-valava, eBurgos, eCantabria, eGuadalajara, eLa Rioja, eLeón, eMadrid, eNavarra, eSalamanca, eToledo, eValladolid naseZaragoza, ngemuva kokugxuma.
Izingane zesikole, eziphakathi kweminyaka eyisishiyagalolunye neshumi nesikhombisa, ezihlala e-valava noma kwenye yezindawo, ubukhulu besenzo, seCaja Vital Kutxa (Burgos, Cantabria, Guadalajara, La Rioja, León, Madrid, Navarra, Salamanca, Toledo, Valladolid noZaragoza).
Kusungulwa izigaba ezine:
a) Ingane ngayinye, yemisebenzi yokudala ngayinye yezingane zesikole ezineminyaka ephakathi kwengu-9 nengu-13 ubudala.
b) Intsha ngayinye, yokwenza umsebenzi wokudala ngamunye wezingane zesikole eziphakathi kweminyaka eyi-14 nengu-17 ubudala.
c) Iqoqo Lezingane (9 - 13 ubudala). Imisebenzi eyethulwe ngamaqembu abafundi abavela esikhungweni esifanayo nasenkambweni, enesilinganiso esiphansi semikhawulo yamahlaya ayi-6 noma izindaba eqenjini ngalinye lomncintiswano.
d) Iqoqo leNtsha (14 - 17 ubudala). Imisebenzi eyethulwe ngamaqembu abafundi abavela esikhungweni esifanayo nasenkambweni, enesilinganiso esiphansi semikhawulo yamahlaya ayi-6 noma izindaba ngeqembu ngalinye elincintisanayo.
Ingqikithi, ulimi, inqubo nokwakhiwa kwamahlaya kuzoba mahhala. Indaba ngayinye noma ukulandisa kuzoba namakhasi ayi-1 kuye kwayi-4, okumele athulwe kumakhadibhodi, (ukwesekwa okuqinile) noma idijithali (ifomethi ye-jpg ku-300 dpi). Ifomethi yomsebenzi kufanele ibe ubuncane be-A4 futhi ibe ngu-A3. Akudingekile ukuthumela okwangempela.
Uma kwenzeka ikhethwa, inhlangano izocela ukuthunyelwa okufanayo okuzobuyiselwa kumnikazi wayo uma kuphela umbukiso ofanayo.
Amahlaya kufanele abizwe kepha angaqanjwa ngegama. Imvilophu evaliwe izonamathiselwa nemininingwane yomuntu yombhali (igama nesibongo, iminyaka, ikheli, inombolo yocingo, isikhungo sesikole kanye nebanga), kanye neqembu uma kungamaqembu.
Umnqamulajuqu wokwamukelwa kwale misebenzi uzophela ngoDisemba 15, 2008. Azothunyelwa ekomkhulu leKREA Expresión Contemporánea, eCalle Postas, ku-17 01004 Vitoria-Gasteiz, ngqo noma ngokuthunyelwa ngeposi. Imisebenzi nayo ingathunyelwa nge-imeyili info@kreared.com | www.kreared.com
Umncintiswano unikezwe imiklomelo elandelayo:
a) Isigaba ngasinye sezingane:
I-1st - kit ne-plate ye-KREA
I-2st - kit ne-plate ye-KREA
I-3st - kit ne-plate ye-KREA
b) Isigaba sabantu abasha:
Ama-euro angu-1 kuya ku-300 kanye ne-plaque
Ama-euro angu-2 kuya ku-210 kanye ne-plaque
Ama-euro angu-3 kuya ku-150 kanye ne-plaque
c) Isigaba seqoqo lezingane:
I-1st - kit yeKREA, ipuleti kanye neqoqo lamahlaya alinganiselwa kuma-euro angama-300.
I-2st - kit yeKREA, ipuleti kanye neqoqo lamahlaya alinganiselwa kuma-euro angama-300.
I-3st - kit yeKREA, ipuleti kanye neqoqo lamahlaya alinganiselwa kuma-euro angama-300.
d) Isigaba sokuhlanganyela kwentsha:
I-1st - 300 euros, i-plaque neqoqo lamahlaya alinganiselwa kuma-euro angama-300.
I-2st - 210 euros, i-plaque neqoqo lamahlaya alinganiselwa kuma-euro angama-300.
I-3st - 150 euros, i-plaque neqoqo lamahlaya alinganiselwa kuma-euro angama-300.
Umklomelo Okhethekile we-Alava yamahlaya weqoqo elihamba phambili:
Umklomelo okhethekile usungulelwa amahlaya ahlanganisiwe ahamba phambili e-Alava esigabeni ngasinye, aqukethe uhambo 'Losuku Lwesiko kuya ku-valava' lwabafundi abangama-25 nothisha olinganiselwa kuma-euro angama-900.
Amahlaya azonikezwa azoba impahla kaCaja Vital Kutxa.
Ijaji lizoqokwa yiKREA Contemporary Expression, isinqumo sayo kube ngesokugcina. Ungakhuphula inani lemiklomelo, ngenxa yekhwalithi yabo yobuciko kanye nobuchwepheshe obusha, noma ushiye omunye wabo eshiyiwe.
Imisebenzi yokuwina izoshicilelwa ku-www.kreared.com futhi iqoqwe ngevolumu yokuhlanganiswa. Ngokusatshalaliswa kwale misebenzi, i-KREA ingasebenzisa isithombe esiphelele noma imininingwane yemisebenzi esetshenzisiwe ukukhombisa ikhava yekhathalogi, izincwajana kanye namaphosta, noma ezinye izinto zokusabalalisa umbukiso.
I-KREA izokhiqiza umbukiso ngemisebenzi yabaculi abakhethiwe entwasahlobo ka-2009. Umcimbi wemiklomelo uzoba kulo mbukiso, ngosuku nesikhathi esizomenyezelwa ngesikhathi esifanele.
Ngokunjalo, i-KREA ingahle ihlele imibukiso ehambisanayo efanayo ngezikhungo zemfundo namakamelo akhethekile esikhathini esiyizinyanga eziyisishiyagalolunye ngemuva kwesinqumo socingo, imisebenzi eklonyelisiwe futhi ekhethiwe ezohlala idiphozithi e-KREA ngalesi sikhathi.
Iqiniso lokubamba iqhaza kulo mncintiswano licacisa ukwamukelwa okuphelele kwale mithetho, kanye nezinqumo zejaji.
Ngeminye imininingwane noma isicelo sezisekelo, thinta:
I-KREA Isichazamazwi Samanje
Ucingo / Ifeksi 945 150 147
Ukubambisana: Inhlangano ye-Atiza.
· 'Basic Comic Book Guide' elungiselelwe ngabadwebi bakhathuni.
· Izingxoxo zamahlaya ezibhekiswe emhlabeni wezemfundo.
Kubikwa ukuthi imininingwane yomuntu ethunyelwe ngabahlanganyeli kulo mncintiswano izofakwa kufayela elizenzakalelayo eliphethwe yiFundación Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, nehhovisi elibhalisiwe eVitoria-Gasteiz, ePaseo de la Biosfera 6. Abanikazi be imininingwane iyaziswa ngokucubungula okuzenzakalelayo noma cha, lapho idatha yabo izothunyelwa khona, futhi igunyaze ukusetshenziswa kwayo, ngenhloso yokuthumela imininingwane ephathelene nomsebenzi weKREA Expresión Contemporánea / Fundación Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, kufaka phakathi izindlela zikagesi. Ngokufanayo futhi ngenhloso efanayo, bagunyaza ukudluliselwa kwabo eSavings Bank of Vitoria nase-valava, nayo enikwe amandla okwenza kanjalo. Ukugunyazwa kuzoqondakala ukuthi kunikezwe ngaphandle kokuthi ukugunyazwa kuqinisekiswe ngokucacile noma, lapho kufanele khona, ukuhoxiswa kwesigunyazo esinikeziwe.
Ukuphathwa kwemininingwane kuzokwenziwa ngokuqonda okufanele, ngaphandle kokubandlulula, ngokuya nge-Organic Law 15/1999, kaDisemba 13, ekuvikelweni kweDatha yomuntu siqu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Umncintiswano Wamahlaya Esikole